Icons! – ပြင်းရှတဲ့ ၀ိုင်တစ်ခွက်ပေါ့
This entry was posted in စိတ်ထဲရှိသမျှ and tagged Development, Expectation, future, strength. Bookmark the permalink.
2 thoughts on “Icons!”
တောကျောင်းဆရာ | August 2, 2009 at 3:49 am
အော်… ငါ့အစ်မ… ပေါ်လာသေးသကိုး …….. 🙂
ကုမ်ရာသီသူ | August 3, 2009 at 8:53 am
အဟဲ။ ဒီလိုပဲပေါ့ ကျာဆရောင်းရယ်။ 🙂